Ukuthenga izicathulo - omunye izikhathi ezimnandi kakhulu kulo lonke ukulungiselela isizini entsha. Kukhethwa izicathulo manje omkhulu, futhi ngezinye izikhathi unquma ukuthi nawe kudingeka empeleni, kunzima kakhulu. Kule ndaba, into esemqoka - ungalilahli kwemizwelo futhi ukuthenga kahle ukuthi kudingeka ukuqedela isitayela, ngokusekelwe okuqukethwe ikhabethe lakhe, kodwa, Nkulunkulu, ukuthi kunzima kangakanani ukwenza lapho kukhona abaningi kangaka okumnandi! Ngezinye izikhathi akukhona ngisho ngokuphelele ezifanele waphi emasayizi abayeki, kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
Ngakho, uma isitayela eziyisisekelo ikhabethe lakho - ezemidlalo kanye jeans, kodwa ke bame endleleni phezu izicathulo, futhi musa ngigqolozele izicathulo kusihlwa! Ingabe ngikwenza kuphela kakhulu kancane. Phela, ngo-2011 abalimi eyinhloko izicathulo ezemidlalo ukunikeza ukunakwa abathengi ithakazelisa kakhulu futhi onobuhle ukuphila-evuma. Listening, Nike ukhiphe umugqa izicathulo ne onamileyo mikhondo ezimibalabala, futhi Reebok igcile ezinemibala egqamile futhi inhlanganisela ngokugqamile. Bobabili abakhiqizi ukhethe onobuhle Retro-isitayela eminyakeni 80-90, ngakho isicathulo libanzi: zingabantu amade futhi okukhulu, okwenza abanikazi umlenze zibukeke ngaphezulu ethambile. Adidas futhi gone okwengeziwe futhi esethula uchungechunge lwezinkulumo ezemidlalo ballet izicathulo egqamile futhi funny kakhulu ngemicibisholo yawo yensimbi flirty.
Ngokuvamile, kulo nyaka ntandokazi amafomu okukhulu, ikakhulukazi, isitayela lempi. Imigqa Popular anolaka, buckles omkhulu, platform. Ngezinye Gaultier, isibonelo, iqoqo kukhona amabhuzu ezihlekisayo a la ngu grinders, kuphela uzwane ovulekile futhi isithende. Phela, lokhu kungenye umkhuba 2011: uzwane evulekile kakhulu, ikakhulukazi iqakala. Le piece cute futhi flirty ziwusizo, isibonelo, kulesiya simo sezulu, lapho kushisa kakade, kodwa izimbadada ngenkathi okungalungile, futhi kubonakala sengathi lo nyaka leso sikhathi izobanjezelwa. I iyincane igebe kuyoba on izinzwane zakho - ngakho-ke uzobheka umlenze ngomusa ngaphezulu.
Nokho, ngomusa amafomu isifazane, futhi, ngeke anyamalale: Upper izithende futhi simise enhle oyindilinga eyathandeka. umbala bangempela izicathulo - futhi beige, obomvu, ushokoledi, zonke izinhlobo imibala egqamile, obomvu ikakhulukazi, isilwane mikhondo, futhi yebo, black okuphakade. Decor kungaba noma ikuphi, ngisho engacabangeki.
Futhi, ekugcineni, Izicathulo. Kuyinto futhi izindlu fashion eziningi imfashini, isibonelo, Marc Jacobs, Chanel, Prada ukubheja iyona lula: babesebenzisa amagejambazo izithende yayikhona intuthuko engatheni, ezizibeni ezithambile ububanzi - futhi ngifisa ukubabonga ngokubamba lo omkhulu.
Iphinde uhlala walithanda ngesizini edlule izicathulo isisindo ngaphandle isithende kwi yedwa mncane - lokhu ballet emafulethini nazimbadada, ikakhulukazi isitayela Roman, plus Umkhuba omusha - ifana nezicathulo kwi isithende amancane, kancane funny.
Indlela ukukhetha izicathulo ilungelo? It silula: okokuqala, kumelwe uhambisane ubukhulu futhi kungabalimazi ukungakhululeki ngesikhathi efanelekayo. Waphi emasayizi kulokhu kungekho ndima ekhethekile ukudlala ngisho uma wazi usayizi wesithombe sakho, futhi noma iyiphi yiphi isayizi ishidi ijwayelekile kuwe, wena namanje ancike ulwazi lwabo akufanele ke, ngoba ngisho umthengisi olulodwa amabili namabhuzu izicathulo sinye zingahluka . Yingakho kudingeka ukuzama ngokucophelela phezu izicathulo elandelayo ngobukhulu imodeli ungathanda:
- amabili namabhuzu lingakanani
- pair of usayizi ezincane
- pair elilodwa ubukhulu emikhulu
Futhi ukhethe ezimenza azizwe atjhaphulukile. Ngokuphazima umcimbi awukwazi ukuthatha izicathulo Friend: bangaki abantu Ngikuthembile ukuthi, bathi, lesikhumba, yokwelula, futhi engawuboni yokwelula! Kunalokho, kwakuthiwa, yebo, angakwenza lokho, kodwa awazi cwilisa izicathulo njengoba ezihambisanayo. Elikhulu waphi emasayizi futhi akakwazi ukuthenga - kungaholela izinyawo flat, a calluses ezinyantisayo, futhi kungase kuhlukumeze impela uma izicathulo ne izithende noma platform. okubaluleke kakhulu ukufana izicathulo ephelele futhi ephakamisa lwaleli: ngenye kuqinisekiswa uhlushwa imilenze yakhe futhi emuva, ihlolwe. Elinye iphuzu: akufanele ukusheshe izicathulo, okuyinto ngakho sengathi zibukeke: abantu babe ezahlukene isakhiwo unyawo, naphezu kwayo yonke izicathulo ihlezi ngezindlela ezahlukene, ngisho imilenze ephelele kakhulu, amanye amamodeli angabukeka sibi kakhulu kunalokho okuboniswa ewindini, ngakho-ke kungcono ukuba ivunguze kanye kanye ngaphambi esibukweni futhi ngokucophelela sizihlole zonke engele.
Uhlelo sezimali Russian Federation, oyiyo